ထင်ဟပ်ပြသရန်အထောက်အကူပြုသောVíctor Hugo မှ ၅၅ ခု ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
၁၈၂၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ တွင်ကမ္ဘာကြီးကိုဗစ်တာဟူဂိုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူသည်သမာဓိစောင့်သိသူ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းစာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ပြဇာတ်ရေးဆရာ၊ ပြင်သစ်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အတွက်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ယနေ့တိုင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
သူသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးနပိုလီယံ ၃ ၏တောင်ပြဇာတ်တွင်“ အပြစ်ဒဏ်များ” နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ၁၈၅၂ ခုနှစ်မှ ၁၈၇၉ ခုနှစ်အတွင်းပြင်သစ်အင်ပါယာနှင့်တိုက်ဆိုင်စွာနှစ်ပေါင်း ၂၀ အထိပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူသည်သူ၏လုပ်ရပ်များကြောင့်ဂုဏ်ထူးများစွာရရှိခဲ့ပြီးတတိယသမ္မတအဖွဲ့ဝင်များသည်သူသည်ပြည်နယ်ဈာပနအခမ်းအနားကျင်းပပြီးသေဆုံးခြင်းကြောင့်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသော်လည်းထောင်နှင့်ချီသောလူများကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏အလောင်း၏အရုပ်အကြွင်းအကျန်များကိုပဲရစ်ရှိ Pantheon တွင်ပြသခဲ့သည်။
သူ၏အနုပညာသည်ဖျော်ဖြေရေးမျှသာမဟုတ်ဘဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ စာတစ်စောင်စီကိုစာဖတ်ချင်သူများအားနှစ်သက်စေရန်နှင့်ညွှန်ကြားရန်ဖြစ်သည်။ သူ၏အမှုတော်များကိုသူ့အားဖတ်ရှုသူများ၏ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အမြဲညွှန်ပြသည်။ သူ၏လက်“ Les Miserables” သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောအလုပ်များဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဗစ်တာသည်သေဆုံးမှုမှအမြဲရေးသားခဲ့သည်။ သူ၏ဇာတ်ကောင်များသည်များသောအားဖြင့်သူမလိုချင်သောကံကြမ္မာကိုခံစားစေသည့်ပြင်ပတာဝန်ဝတ္တရားများကြောင့်သူရဲကောင်းများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဗစ်တာဟူဂိုသည်စာပေစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများသို့မ ၀ င်ဘဲပရိသတ်၏နှလုံးကိုမည်သို့မည်ပုံရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းအမြဲသိပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပါလိမ့်မယ်သော၎င်း၏ဂန္အက္ခရာများအကြားဖန်တီးပါ။
နောက်ပြီးမင်းကိုသူ့စကားစုအချို့ကိုသင်ချန်ထားလိမ့်မည်။ သို့မှသာသူ၏ဇာတ်ကြောင်းစတိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်ကူးရလိမ့်မည်။ ဘ ၀၊ ချစ်ခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ သို့တိုင်သူသည်သင်သူ့ကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပြီးသူ၏လက်ရာများကိုဖတ်နိုင်ပြီးသူ၏စကားများမှသင့်အားလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန်ရှာဖွေခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ကိုးရာစုရန်။ တစ်ချိန်ကသင့်ကိုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သောထောင်ပေါင်းများစွာသောစာဖတ်သူတွေလက်ထဲကစကားအချို့ သူသည်ပါရီမြို့၏ Pantheon တွင်အိပ်ပျော်နေသော်လည်းဗစ်တာဟူဂိုနှင့်ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းသည်အရေးကြီးကြောင်းသူတို့နားလည်ကြသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သစ်ပင်တစ်ပင်နှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်အောက်တွင်ကွေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုလုံးကိုနက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်စေပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်နှလုံး၏အပျက်အယွင်းများတွင်စိမ်းလန်းစိုပြည်သည်။
မဟုတ်ပါ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အလင်းကိုမပျောက်စေပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိရာမျက်စိကွယ်မျက်စိမရှိ။
သေးငယ်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။ လူတစ် ဦး ၏ကြီးမြတ်မှုကိုယင်း၏အစိတ်အပိုင်းများအရေအတွက်ဖြင့်မတိုင်းတာပါ၊
ဘ ၀ ၌အဆုံးစွန်ပျော်ရွှင်မှုသည်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုချစ်နေသော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်ကိုပိုမိုချစ်မြတ်နိုးကြောင်းသိရခြင်းဖြစ်သည်။
အနာဂတ်မှာနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်။ အကြောင်းမူကား၊ အားနည်းသောသူသည်၊ အဆိုပါကြောက်ဘို့, မသိသော။ သတ္တိအဘို့အကအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်မှုသည်ဒinနိကဗေဒတွင်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ အနုပညာအတွက်, လှုံ့ဆော်မှု; နိုင်ငံရေး, ဥပဒေ၌တည်၏။
ရယ်စရာအရာ! လူငယ်တစ် ဦး ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ပထမဆုံးလက္ခဏာမှာရှက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး မှာရဲရင့်ခြင်းပါ။
ပေါင်းပင်များမရှိ၊ ဆိုးသောသူမရှိ။ မကောင်းတဲ့လယ်သမားတွေပဲရှိတယ်။
ဝံ့ - တိုးတက်မှုကိုဤနည်းဖြင့်သာလုပ်သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မျှသာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ အဖြစ်မှန်မှာစိုးလ်ဖြစ်သည်။
မနာလိုမှုဆိုတာဘာလဲ။ သူ့ကိုအလင်း ပေး၍ နွေးစေသောအလင်းကိုမုန်းသည်။
မျက်ရည်များ မှလွဲ၍ ဘုရားသခင်အားမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » 55 သင့်ကိုထင်ဟပ်ပြသရန်ကူညီပေးမည့် Victor Hugo မှစာပိုဒ်တိုများ
အားလုံးမှန်သည်။ ကောင်းသောစာပိုဒ်တိုများ! ဒါကမင်းကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားစေတယ်။